Yakadzika tsime ndiro
Iyo inoshandiswa pakuchengeta uye kuendesa kwesarudzo yekuvavarira.
1.Made yezviri pachena polymer zvinhu PP.
2.Tube pasi inogona kumira yakasimba yekumusoro centrifugal simba.
3.Iyo yakasarudzika yekunze tambo dhizaini inopa yakanakisa kuisa chisimbiso uye inoderedza njodzi yemuenzaniso kusvibiswa.
4.Unique rusvingo ukobvu dhizaini kutsungirira tembiricha kubva -80 kusvika 120 madhigirii.
5.Hapana DNA / RNA enzymes.
Hunhu hweSaliva Muunganidzi
Mate muteresi anonyanya kuve akaunganidzwa ekuunganidza fanera, sampling chubhu uye chubhu yekuvhara. Kuchengetedza mvura uye mate mushure mekusanganisa zvinogona kuchengetwa mukamuri tembiricha kwenguva yakareba, mate sampuro DNA / RNA haina kukuvara. Mate vateresi vane nharaunda uye vane hunyoro.
Mate sampling inzira isingarwadzi uye isinga pindike yekuwana zvigadzirwa zveDNA / RNA. Iyi sampling nzira haizounze chero kunetsekana kune vanhu vakatemerwa, uye zviri nyore kutambirwa, saka huwandu hwesampling hwekutsvagisa geni hunogona kuwedzerwa.
Ndezvipi zvinoshandiswa nemutori wemate
Mate vateresi anogona kushandiswa kuunganidza mate masampula ezvemumuromo secretions uye kuchengetwa mukati tembiricha. Mushure mekunge sampuro yaburitswa, inogona kushandiswa kuchipatara mu vitro kuongororwa.
Inogona kushandiswa kuDNA paternity test uye genetic chirwere chekutarisa uye zvimwe zvinhu
* Zvakareruka: maitiro ekuunganidza ari nyore, anokurumidza uye ari nyore kushandisa;
* Flexible: inogona kuunganidzwa zviri nyore murabhoritari, kukiriniki, kana kunyangwe kumba;
* Yakareruka: Iyo yakaunganidzwa mate yakagadzikana uye inochengetwa mukamuri tembiricha, iri nyore kutakurwa;
* Yakakura: kunyanya inokodzera vana nevarwere vasinga svitse zvinodikanwa zvekuunganidzwa kweropa sampuro;
Kuchengetedzwa: Kusaunganidzwa kwevasampuli kunoderedza mukana wehutachiona;
* Kubudirira kwepamusoro: sampuro yekugadzirisa iri nyore kushambadzira otomatiki, uye yakawanda uye iri nani mhando DNA inogona kuwanikwa.
* Noninvasive uye isiri-invasive muunganidzwa wevanhu wemumuromo chaiwo akateurwa maseru eDNA, inogamuchirwa nevazhinji vashandisi
* Fekitori yakananga kutengesa, kukurumidza kugadzirisa, kupa mhinduro kwehunyanzvi, chengetedzo yesero pane tembiricha yemukati, hazvisi nyore kudzikisira DNA
Aihwa. Kukwanisa Tsananguro Cap Kuzvimirira Kurongedza / Ctns Mbereko
PC1077 × Saliva Muunganidzi × × 200 Inesarudzo
PC1054 5ml Sampling chubhu √ √ 5000 Inesarudzo
PC1087 7ml Sampling chubhu √ √ 5000 Inesarudzo
PC1088 10ml Sampling chubhu √ √ 5000 Inesarudzo
PC1054 10ml sampling chubhu
PC1077 Mate muteresi
Pashure: Spin ikholamu
Viral DNA / RNA Kuwedzera kit (Magnetic Beads)